दिनानाथ शर्मा भन्छन त्यो बेला हाम्रो एजेण्डा धर्मनिरपेक्षता नै थिएन – सुदूरखबर डटकम
दिनानाथ शर्मा भन्छन त्यो बेला हाम्रो एजेण्डा धर्मनिरपेक्षता नै थिएन
सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का राष्ट्रिय सभाका संसदीय दलका नेता दिनानाथ शर्माले राजनितीमा धर्मलाई बोकेर हिँड्न नहुने बताएका छन् । सोमबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको विशेष साक्षात्कारमा बोल्दै नेता शर्माले यस्तो बताएका हुन् । धर्मलाई राजनीतिक एजेन्डा बनाउन नहुने भन्दै उनले भने “धर्म बोकेर हिँड्दा राम्रो हुँदैन् । अहिले धर्मलाई राजनीतिक एजेण्डा बनाउन त सजिलो होला । तर, भोलि सरकारमा हुँदा मिलाउन गाह्रो हुँन्छ” । आफूहरुले जनयुद्धकालिन समयमा पनि मठ, मन्दिरमा आक्रमण नगरेको बताउँदै उनले धर्म, भाषा र जात अत्यन्तै संवेदनशील कुरा भएकोले यसमा विचार पु¥याउनु पर्ने तर्क गरे ।
आफुहरु मुलधारको राजनीतिमा आउँदा धर्मनिरपेक्षताको माग नभएको समेत बताए । उनले बिगतलाई स्मरण गराउँदै भने “त्यतिवेला पनि धर्म निरपेक्षता बनाउने हाम्रो माग थिएन् । १२ बुँदे सम्झौतापछि हामी सरकारमा आउनुपुर्व नै धर्म निरपेक्षता बनाईयो । त्यतिवेला सरकारमा कांग्रेस र तत्कालिन् नेकपा एमाले नै थियो । त्यतिवेला त्यो एजेण्डा नै थिएन् । को बाट आयो ? कहाँबाट आयो ? हामीलाई थाहा थिएन् । तर, हामीले विरोध गरेनौं । हामी धर्मको विषयमा पहिलेदेखि नै संवेदनशील थियौं ।” एक फरक प्रसंगमा उनले बर्तमान सरकारले राम्रो काम गर्ने विश्वास दिलाउँदै उनले अब देशमा आन्दोलन नभई मुलुक समृद्ध बनाउनको लागि युद्धस्तरमा काम गर्नुपर्ने उनको भनाई छ ।